कार्ल माक्र्सको स्मारकमाथि हमला ले उब्जाएको प्रश्न । – On Khabar
Banner News गृहपृष्ठ प्रवास राजनीति समाचार
कार्ल माक्र्सको स्मारकमाथि हमला ले उब्जाएको प्रश्न ।
लन्डनमा रहेको हाइगेट चिहानमा कार्ल मार्क्सको प्रतिमामा एक महिनाको अन्तरमा दोस्रोपटक आक्रमण गरिएको छ । प्रतिमामा ‘घृणाको सिद्धान्त’ तथा ‘नरसंहारका योजनाकार’ भनी रातो पेन्टले दलिएको थियो । चिहान उत्तरी लन्डनमा रहेको छ । दुई हप्ताअघि चिहानको सिंगमरमरको प्लाकमा कोतर्ने प्रयास गरिएको थियो र स्ल्याबबाट मार्क्सको नाम ह्याम्मर हानेर उप्काउन कोशिश गरिएको थियो ।
शनिवार चिहानमा पुगेका म्याक्सवेल ब्लोफील्डले आक्रमणबाट निकै स्तब्ध भएको बताए । उनी ब्रिटिश म्युजियममा काम गर्छन् । उनले भने, ‘यो मसानघाटको आकर्षण थियो । रातो पेन्ट त हराउला तर यस्तो किसिमको क्षति दुईचोटि हुनु राम्रो कुरा हैन ।’ अघिल्लो ह्याम्मर आक्रमणपछि फ्रेन्ड्स अफ हाइगेट सिमेटरी ट्रस्टले यो जानाजान गरिएको आक्रमण भएको बतायो ।
ट्रस्टका प्रमुख कार्यकारी इयन डंगाभेलले यो आक्रमण निकै निराश बनाउने किसिमको भएको बताए । मार्क्सको यो प्रतिमामा मार्क्स ग्रेभ ट्रस्टको स्वामित्व छ र यसलाई मार्क्स मेमोरियल लाइब्रेरीले प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यो घटना अत्यन्तै निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको छ । कमरेड माक्र्सको स्मारकमाथिको तोडफोड विश्व सर्वहारावर्गले चलाएको समाजवादी आन्दोलन तथा कमरेड माक्र्सको आदर्श र उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको दर्शन र विचारमाथिको हमला हो । विश्वमै माक्र्सवादबारे नौलो किसिमको बहस चलिरहेको छ यस्तो अवस्थामा माक्र्समाथीको आक्रमणको योजनाकार पूँजीवादीहरु नै हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ ।
Banner News अर्थ गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार बिज्ञान/प्रबिधी समाचार
नेताहरुलाई चुनावखर्च देखी राजस्वका हाकिमलाई घुस दिने एनसेलले तिर्ला त पूरा कर ? नतिरे कस्तो होला कारबाही, के भन्छ लेखा समिति ?
February 10, 2019 February 10, 2019 onkhabar
Spread the love अनखबर माघ २७ काठमाडौं– संघीय संसद्को अर्थ समितिका सदस्य (सांसद)हरूले एनसेलका सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरेका छन् । आइतवार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सदस्य (सांसदहरू)ले अहिलेसम्म एनसेलका सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णय समितिमा पेश गर्न माग गरेका हुन् । आइतवारको बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलका बारेमा अहिलेसम्म […]
विप्लव निकट विद्यार्थीले लगाए सीमानामा काँडेतार, देशभर सीमाना अवलोकन गर्ने !
Spread the love अनखबर माघ ७ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका वडा नं। ५ स्थित मरचरीकुटीमा रहेको नाचनचरीको पिलर नम्बर ४५ नजिक विगतमा भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूभागमा अखिल क्रान्तिकारीले काँडेतार लगाएको छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिको आयोजनामा गरिएको उक्त काँडेतारको बार ३० मिटर लामो रहेको जानकारी आयोजकले दिएका छन् । भारतले चितवनको […]
February 13, 2019 February 13, 2019 onkhabar
Spread the love शिव डुम्रे बुटवल १ फागुन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लुम्बिनी व्यूरोले २४ औं जनयुद्ध दिवस बुटवलमा मनाएको छ । झण्डै १० हजारभन्दा धेरै आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट्व्यूरो सदस्य तथा लुम्बिनी व्यूरो इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’ले भ्रष्टहरुको व्यवस्थाको अन्त्य हुने र त्यसको नेतृत्व […]